Anandamide VS CBD: Ndeipi Iri Nani Kune Rako Hutano?
musha > Anandamide VS CBD: Ndeipi Iri Nani Kune Rako Hutano? Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezvavo!
Anandamide VS CBD: Ndeipi Iri Nani Kune Rako Hutano? Zvese zvaunoda Kuti Uzive Nezvavo!
Chii chinonzi Anandamide (AEA)
Anandamide (AEA), inozivikanwawo seyakanaka mamorekuru, kana N-arachidonoylethanolamine (AEA), ane mafuta acid asingaoneki neurotransmitter. Zita rekuti Anadamida (AEA) rakatorwa kubva kuSanskrit yeMufaro "Ananda." Raphael Mechoulam akagadzira izwi iri. Sei, pamwe nevabatsiri vake vaviri, WA Devane naLumír Hanuš, vakatanga kuwana "Anandamide" mu1992. Anandamide (AEA) igadziriro huru yezvakawanda zvezvinetso zvedu zvepanyama uye zvepfungwa.
Chii chinonzi Cannabidiol (CBD)?
Cannabidiol (CBD) ndiyo yechipiri makemikari anoshanda anozivikanwa se cannabinoids anowanikwa mu cannabis sativa (mbanje kana hemp). Tetrahydrocannabinol (THC) ndiyo yakanyanya kuwanda uye zvakare inonyanya kugadzikana cannabinoid inowanikwa mumuti wecannabis. THC inosanganisirwa nekuwana iyo "yakakwira" kunzwa.
Nekudaro, CBD haina psychoactive uye inotorwa kubva kune hemp chirimwa icho chine yakaderera huwandu hweTHC. Iyi fuma yaita kuti CBD iwane mukurumbira mune yehutano uye hutano chikamu.
Cannabidiol (CBD) oiri kune rimwe divi inotorwa kubva kuchirimwa checannabis nekuwedzera iyo yakaburitswa CBD kune inotakura mafuta senge hemp mbeu yemafuta kana mafuta ekokonati.
Anandamide & Cannabidiol MIBVUNZO
Chii chinonzi Anandamide?
Anandamide, inozivikanwawo seN-arachidonoylethanolamine, ine mafuta acid neurotransmitter yakatorwa kubva kune isiri-oxidative metabolism ye eicosatetraenoic acid, yakakosha omega-6 fatty acid. Zita rinotorwa kubva kuSanskrit izwi ananda, zvinoreva kuti "mufaro, mufaro, kufara", uye amide.
Anandamide ihormone here?
Tsvagiridzo inopa yekutanga kubatana pakati peoxytocin - inonzi "love hormone" - uye anandamide, iyo yave ichinzi "bliss molekyuli" yebasa rayo mukumisikidza cannabinoid receptors mumaseru ehuropi kusimudzira kurudziro uye mufaro.
Anandamide inonakidza here kana inodzivirira?
Mukupedzisa, cannabinoid zvinogamuchirwa zveiyo CB1 mhando pamwe neyakagumira ligand, anandamide, vanobatanidzwa mukutonga kweiyo neuronal kusununguka, nekudaro kudzikisira kufadza neurotransmission panzvimbo yepreynaptic, nzira inogona kuve yakabatanidzwa mukudzivirira kwekunyanyisa kufadza kunotungamira kune .
Ndeapi maviri akanyanya kutsvakirwa endocannabinoids ayo muviri unogadzira?
Vanotsvaga vanofungidzira kuti panogona kunge paine wechitatu cannabinoid receptor yakamirira kuwanikwa. Endocannabinoids ndizvo zvinhu zvinoitwa nemitumbi yedu zvakasimbisa ma receptors aya. Iwo maviri anonyatsonzwisiswa emamorekuru aya anonzi anandamide uye 2-arachidonoylglycerol (2-AG).
Muviri wemunhu une cannabinoid system here?
Iyo endogenous cannabinoid system-yakatumidzwa chirimwa chakatungamira mukuwanikwa kwayo - ndeimwe yeakakosha mafizikiki masisitimu anowanikwa mukumisikidza nekuchengetedza hutano hwevanhu. Endocannabinoids uye avo anogamuchira anowanikwa mumuviri wese: muuropi, nhengo, zvinobatana matishu, gland, uye maseru ekudzivirira.
Ndeipi yekutanga cannabinoid yakawanikwa?
Muna 1992, lab yaMechoulam yakasarudzika yekutanga endocannabinoid: Morekuru iro rakazopedzisira rasarudzwa seCB1 receptor part agonist. Iyo yaizivikanwa se arachidonoyl ethanolamide uye inonzi anandamide.
Anandamide chokoreti here?
THC, zvisinei, haina kuwanikwa muchokoreti. Pane kudaro, imwe kemikari, iyo neurotransmitter inonzi anandamide, yakave yakasarudzika muchokoreti. Sezvineiwo, anandamide inogadzirwawo zvakasikwa muuropi.
Chokoreti ndeye cannabinoid here?
Anandamide inonzi endocannabinoid nekuti inogadzirwa nemuviri wedu uye inoteedzera iyo cannabinoids inowanikwa mumuti wembanje. Nekudaro, chinongedzo muchokoreti uye chinongedzo mumuti wembanje zvese zvinokwanisa kusimudzira huropi hwedu hwembanje neurotransmitter system.
Chokoreti ine theobromine here?
Theobromine ndiyo yekutanga alkaloid inowanikwa mukocoa uye chokoreti. Kocoa poda inogona kusiyana muhuwandu hweiyo theobromine, kubva pa2% theobromine, inokwira kusvika kumatunhu akakwirira akatenderedza 10%. … Kazhinji kazhinji kune kwakanyanya kusviba murima pane mukaka chokoreti.
Ndezvipi zvakajairika cannabinoids?
Iwo maviri makuru cannabinoids idelta-9-tetrahydrocannabinol (THC) uye cannabidiol (CBD). Iyo inonyanya kuzivikanwa yevaviri ndeye delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), inova kemikari inoitisa kuti psychoactive mhedzisiro ye cannabis.
Chii chinonzi rufaro mamorekuru?
Anandamide kenza inozivikanwa muuropi iyo yave ichidaidzwa kunzi "bliss molecule" kune iro basa rairi kuita mukuburitsa manzwiro emufaro. … Inoshanda nekusunga kune zvakagamuchirwa zvakafanana muuropi sechinhu chikuru chepfungwa chembanje.
Anandamide mushonga here?
Anandamide, endo native ligand yeuropi cannabinoid CB1 receptors, inogadzira akawanda maitiro maitiro akafanana neayo Δ9-tetrahydrocannabinol (THC), iyo inonyanya kugadzikana psychoactive chinhu mukati mbanje.
Muviri wemunhu unoburitsa cannabinoids?
Endocannabinoids. Endocannabinoids, inonziwo endogenous cannabinoids, mamorekuru akagadzirwa nemuviri wako. Izvo zvakafanana ne cannabinoids, asi zvinogadzirwa nemuviri wako.
Ko CBD inowedzera dopamine here?
CBD zvakare inokurudzira iyo adenosine receptor kukurudzira kuburitswa kwe glutamate uye dopamine neurotransmitters. Kubudikidza nekudyidzana kwayo nedopamine receptors, inobatsira kukwidziridza mwero wedopamine uye kudzora kugona, kukurudzira, uye maitiro ekutsvaga mubairo.
Indica inowedzera dopamine here?
inoderedza kurwadziwa kwakanyanya. kunowedzera kudya. inowedzera dopamine (iyo neurotransmitter iyo inobatsira kudzora mubairo wehuropi uye nzvimbo dzemafaro) yekushandisa nguva yehusiku.
Rudzii rwemushonga chokoreti?
Pamusoro pe shuga, chokoreti zvakare ine mamwe maviri neuroactive zvinodhaka, caffeine uye theobromine. Chokoreti haingomutsidzi maopiate receptors muhuropi hwedu, zvakare inokonzeresa kuburitswa kwemakemikari emakemikari munzvimbo dzinonakidza dzehuropi.
Chii chinonzi anandamide mumuviri?
Miviri yedu inogadzira anandamide pane-kudiwa, kuti ishandiswe pazvinodiwa kuchengetedza homeostasis. Anandamide inoita izvi nekubatsira kudzora kuzvimba uye chiratidzo cheeuron. Sezvo zvaakasikwa, inosunga zvakanyanya needu cannabinoid receptors CB1 uye CB2 sezvinoita cannabinoids senge THC yaizozadza.
Chii chinonzi cannabinoid receptor system?
Cannabinoid receptors, iri mumuviri wese, iri chikamu cheiyo endocannabinoid system, iyo inosanganisirwa mune akasiyana maitiro ehupenyu anosanganisira chishuwo, kurwadziwa-kunzwa, kushushikana, uye ndangariro. Cannabinoid receptors ndeyekirasi yesero membrane receptors mune G protein-yakasangana receptor superfamily.
Ndeapi akasiyana mapoka anoshanda aripo muanandamide?
Anandamide anoshanda mapoka anosanganisira amides, esters, uye ethers eakareba-cheni polyunsaturated fatty acids, uye zvine mutsigo kugovera akakosha macaphophophores neD-9-tetrahydrocannabinol (THC).
Iwe unowedzera sei anandamide mazinga zvakasununguka?
Idya chikafu chakapfuma mune izvi michero uye inhibit yako FAAH yekugadzira iyo inowedzera ako anandamide mazinga! Chokoreti ndechimwe chikafu chinogona kubatsira kuwedzera anandamide. Ine mukomboni inozivikanwa se ethylenediamine iyo inotitadzisa kugadzirwa kweFAAH. Chengetedza izvi zvitatu zvekudya mupfungwa nguva inotevera paunopinda muchitoro.
Chokoreti ine anandamide here?
Chokoreti mushonga here?
Chokoreti ine huwandu hwakakura hweshuga. Pamusoro pe shuga, chokoreti zvakare ine mamwe maviri neuroactive zvinodhaka, caffeine uye theobromine. Chokoreti haingomutsidzi maopiate receptors muhuropi hwedu, zvakare inokonzeresa kuburitswa kwemakemikari emakemikari munzvimbo dzinonakidza dzehuropi.
Chii chinonzi mushonga muchokoreti?
Theobromine ndiyo yekutanga alkaloid inowanikwa mukocoa uye chokoreti.
Ndeupi makemikari aripo muchokoreti?
Theobromine, yaimbozivikanwa se xantheose, inovava alkaloid yemuti wecacao, ine fomu yemakemikari C7H8N4O2. Inowanikwa muchokoreti, uye zvakare mune zvimwe zvakati wandei zvekudya, kusanganisira mashizha emuti wetii, uye kola nut.
Chokoreti inowedzera serotonin here?
Nekudaro, nekuti chokoreti ine tryptophan, iyo inowedzera inokonzeresa serotonin inogona kubatsira kutsanangura kuti sei munhu anganzwa achifara, kudzikama, kana kushomeka kunetseka mushure mekudya chimedu chechokoreti keke rake (Serotonin).
Chii chinonzi anandamide chinokonzera?
Anandamide inotora chinhanho mukutonga kwehunhu hwekudyisa, uye chizvarwa cheeural chekurudzira uye mufaro. Anandamide jekiseni yakanangana neiyo forebrain mubairo-inoenderana nehuropi dhizaini nusus accumbens inowedzera mhinduro dzinonakidza dzemakonzo kune unopa mubayiro we sucrose kuravira, uye inowedzera kudya kwekudya futi.
CBD inorwisa antioxidant here?
THC uye CBD zvine simba antioxidants - zvine simba kudarika vhitamini C uye E. Muchokwadi, iyo US Hurumende Patent 1999/008769 yakanangana neuroprotectant uye antioxidant zvivakwa zve cannabinoids.
Chii chinoitwa neAFAAH enzyme?
Fatty acid amide hydrolase (FAAH) mammalian inosanganisa membrane enzyme iyo inoshatisa mafuta ane asidi amide mhuri yemagumo ekuratidzira lipids, ayo anosanganisira endo native cannabinoid anandamide uye iyo yekurara-inokonzeresa chinhu oleamide.
CBD inobata sei anandamide?
Zvidzidzo zveBiochemical zvinoratidza kuti cannabidiol inogona kuwedzera endogenous anandamide signaling zvisina kunangana, nekudzivisa kuora kwema intracellular kweanandamide yakagadziriswa neiyo enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH).
Izwi rekuti cannabinoid rinoreva chese chemakemikari zvinhu, zvisinei nemamiriro kana mabviro, ayo anobatana nema cannabinoid zvinogamuchirwa zvemuviri nehuropi uye zvine mhedzisiro yakafanana kune izvo zvinogadzirwa neCannabis Sativa chirimwa. … Iwo maviri makuru cannabinoids idelta-9-tetrahydrocannabinol (THC) uye cannabidiol (CBD).
Chii chinonzi endocannabinoid system uye inoitei?
Muviri wemunhu une yakasarudzika system inonzi endocannabinoid system (ECS), iyo inosanganisirwa mukugadzirisa akasiyana mabasa anosanganisira kurara, kuda kudya, kurwadziwa uye immune system mhinduro.
Muviri une cannabinoid receptors?
Cannabinoid receptors, iri mumuviri wese, iri chikamu cheiyo endocannabinoid system, iyo inosanganisirwa mune akasiyana maitiro ehupenyu anosanganisira chishuwo, kurwadziwa-kunzwa, kushushikana, uye ndangariro. … Muna 2007, kusungwa kweanoverengeka cannabinoids kuG protein-yakasangana receptor GPR55 muuropi kwakatsanangurwa.
Ko CBD inowedzera anandamide here?
Panyaya yeiyo cannabinoid inogamuchira-inotsamira mhedzisiro yeCDD pane yakadzidza yekutya mutemo inotsanangurwa pamusoro, CBD inowedzera anandamide mazinga nekudzivirira mutakuri-Mediated reuptake uye kudzikisira neFAAH.
Ndeipi cannabinoid inoshandiswa kunetseka?
Nedhidhi yakaderera yeTC uye muyero wakadzikama weCDD, Harlequin's cannabinoid profile yakanyatsokodzera varwi vekushushikana vasina hanya nemufaro munyoro. Yayo yakawanda kwazvo terpene ndeye myrcene, iyo inofungidzirwa kuve inozorodza mhedzisiro uye yanga ichishandiswa munhoroondo yese senge yekurara rubatsiro.
CBD inobatsira here kunetseka?
CBD inowanzo shandiswa kugadzirisa kushushikana, uye kune varwere vanotambura kuburikidza nekusuwa kwekushaya hope, zvidzidzo zvinoratidza kuti CBD inogona kubatsira vese kurara nekurara. CBD inogona kupa sarudzo yekurapa akasiyana marudzi ekurwadziwa kusingaperi.
Doro rinobatsira here kunetseka?
Doro rinonyaradza uye rinoodza mwoyo iro rinokanganisa hurongwa hwepakati hwetsinga. Pakutanga, kunwa kunogona kudzikisa kutya uye kubvisa pfungwa dzako pamatambudziko ako. Iyo inogona kukubatsira iwe kuti unzwe kushoma kunyara, kukupa iwe kukurudzira mune mweya, uye kukuita iwe unzwe kazhinji kazhinji wakasununguka.
Ini ndinowanikwa sei ndine kushushikana?
Kuti uongorore kusagadzikana kwekushushikana, chiremba anoita bvunzo yemuviri, anobvunza nezvezviratidzo zvako, uye anokurudzira kuongororwa kweropa, izvo zvinobatsira chiremba kuona kana chimwe chirwere, senge hypothyroidism, chingave chiri kukonzera zviratidzo zvako. Chiremba anogona zvakare kubvunza nezve chero mishonga yauri kutora.
Ndeapi madhiragi asingafanirwe kutorwa neCDD?
Antidepressants (senge fluoxetine, kana Prozac)
Mishonga inogona kukotsira (antipsychotic, benzodiazepines)
Macrolide mishonga inorwisa mabhakitiriya (erythromycin, clarithromycin)
Mwoyo mishonga (imwe calcium chiteshi blockers)
Ko CBD inoburitsa dopamine here?
Ndeipi yakaderera dopamine inonzwa senge?
Zvimwe zviratidzo nezviratidzo zvemamiriro ane chekuita nekushomeka kwedopamine zvinosanganisira: mhasuru, kuputika, kana kudedera. kurwadziwa nemarwadzo. kuomarara mumhasuru.
Ko caffeine inokwidza dopamine mazinga here?
Caffeine, iyo inonyanya kudyiwa psychoactive chinhu munyika, inoshandiswa kukurudzira kumuka uye kuwedzera kusvinura. Kufanana nemimwe inomutsa-kukurudzira zvinodhaka (zvinokurudzira uye modafinil), caffeine inowedzera dopamine (DA) kuisa chiratidzo muuropi, iyo inonyanya kuita nekupikisa adenosine A2A receptors (A2AR).
Ndeipi inokurumidza nzira yekuwedzera dopamine?
Idya Zvakawanda zveProtein
Idya Pasina Kuguta Mafuta
Idya bhinzi yeVelvet
Wana Zvakakwana Kurara
Wana Zuva Zvakakwana
CBD inokwidza serotonin here?
CBD hazvireve kuti inowedzera serotonin mazinga, asi inogona kukanganisa maitiro ehuropi hwako emakemikari anogamuchira kune serotonin yatove mune yako system Chidzidzo chemhuka cha2014 chakawana kuti mhedzisiro yeCDD pane izvi zvinogamuchirwa muuropi yakaburitsa zvese zvinodzvinyirira uye zvinopesana nekuzvidya mwoyo.
Inogona here CBD kubatsira uropi hwako?
Vatsvagiri vanotenda kuti kugona kweCBD kuita pane endocannabinoid system uye mamwe masystem ekuratidzira ehuropi anogona kupa mabhenefiti kune avo vane chirwere chetsinga Muchokwadi, kumwe kwekunyanya kudzidza kunoshandiswa kweCDD kuri kurapa kusagadzikana kwetsinga senge pfari uye multiple sclerosis.
Ndingaite sei kusimudza maserotonin mazinga?
Ndeipi yakanakisa CBD oiri yekutenga yekurasikirwa?
Anandamide muyananisi ane lipid anoita seyakagundika ligand ye CB1 receptors. Izvi zvinogamuchirwa zvakare ndiyo yekutanga mamorekuru tarisiro inokonzeresa nezve pharmacological mhedzisiro ye Δ9-tetrahydrocannabinol, iyo psychoactive chinongedzo muCannabis sativa.
Unoita sei anandamide?
Iyo inogadzirwa kubva kuN-arachidonoyl phosphatidylethanolamine nenzira dzakawanda. Iyo yakashatiswa zvakanyanya neayo mafuta acid amide hydrolase (FAAH) enzyme, iyo inoshandura anandamide kuita ethanolamine uye arachidonic acid.
Muviri wemunhu unoburitsa CBD here?
Izvo iwe zvausingazive, zvisinei, kuti izvi zvinotevera kubva kune chokwadi chekuti muviri wemunhu unonyatsogadzira yavo inoguma cannabinoids: zvakasikwa zvakaenzana zvemakemikari anowanikwa mune cannabis chirimwa, senge THC (tetrahydrocannabinol) uye CBD (cannabidiol).
Ko CBD yakakura zvechokwadi here?
Hakuna humbowo, semuenzaniso, kuti CBD inorapa cancer. Kune humbowo hwakaenzanisirwa hwekuti CBD inogona kugadzirisa kusagadzikana kwekurara, kurwadziwa kwe fibromyalgia, mhasuru spasticity inoenderana neakawanda sclerosis, uye kushushikana. "Kubatsira kukuru kwandakaona sachiremba kurapa kusagadzikana kwekurara, kunetseka, uye kurwadziwa," anodaro Dr. Levy.
Zvigadzirwa zveCBD zvakachengeteka here?
Kushandiswa kweCDD kunewo dzimwe njodzi. Kunyangwe ichiwanzoshivirirwa zvakanaka, CBD inogona kukonzeresa mhedzisiro, senge mukanwa wakaoma, manyoka, kudya kwakaderera, kukotsira uye kuneta. CBD inogona zvakare kuyanana nemimwe mishonga yauri kutora, senge rinocheka ropa.
Inoitei CBD kuuropi?
Hunhu uhwu hwakabatana nekwaniso yeCBD yekuita pane zvinogamuchirwa nehuropi zve serotonin, iyo neurotransmitter inodzora manzwiro uye hunhu hwemagariro. Pfupiso Kushandisa CBD yakaratidzirwa kudzikisa kushushikana uye kushushikana mune zvese zvidzidzo zvevanhu nemhuka.
Inokurumidza sei CBD kusiya iyo system?
CBD inowanzo gara mune yako system kwemazuva maviri kusvika mashanu, asi iwo marangi haashande kune wese munhu. Kune vamwe, CBD inogona kugara muhurongwa hwavo kwemavhiki.
Anandamide inowanikwa kupi?
Anandamide inogadzirwa enzymatic munzvimbo dzehuropi dzakakosha mundangariro, maitiro ekufunga uye kutonga kwekufamba. Kutsvagurudza kunoratidza kuti anandamide inoita basa mukugadzira uye kupaza kweyepfupi-nguva kubatana pakati pemasero etsinga, uye izvi zvinoenderana nekudzidza nekuyeuka.
Anandamide ndeye cannabinoid here?
Iyo inonziwo N-arachidonoylethanolamine (AEA), anandamide inopindirana nemuviri weCB receptors zvakafanana ne cannabinoids se THC. Iyo neurotransmitter uye cannabinoid-receptor inosunga mumiririri iyo inoshanda seyechiratidzo mutumwa weiyo CBI receptors iri mumuviri.
Mallet PE, Beninger RJ (1). "Iyo endogenous cannabinoid receptor agonist anandamide inokanganisa ndangariro mumakonzo". Maitiro Ekuita Pharmacology. 1996 (7): 3–276
(2) .Mechoulam R, Fride E (1995). "Iyo isina tara nzira kune endo native uropi cannabinoid ligands, iyo anandamides". MuPertwee RG (ed.). Cannabinoid receptors. Boston: Dzidzo Press. mapeji 233–
(3) .Rapino, C.; Battista, N.; Bari, M.; Maccarrone, M. (2014). "Endocannabinoids sema biomarkers ekuberekesa kwevanhu". Kubereka Kwevanhu Kuvandudza. 20 (4): 501-516.
(4).(2015). Cannabidiol (CBD) uye ayo akafanana: ongororo yemhedzisiro yavo pane kuzvimba. Bioorganic & Mishonga Chemistry, 23 (7), 1377-1385.
(5) .Corroon, J., & Phillips, JA (2018). Chidzidzo cheMuchinjikwa-Chikamu cheCannabidiol Vashandisi. Cannabis uye cannabinoid tsvagiridzo, 3 (1), 152-161.
(6).National Center yeBiotechnology Ruzivo (2020). PubChem Chidimbu Chidimbu cheCID 644019, Cannabidiol. Yakadzorerwa Gumiguru 27, 2020, kubva .
(7) .R de Mello Schier, A., P de Oliveira Ribeiro, N., S Coutinho, D., Machado, S., Arias-Carrión, O., A Crippa, J.,… & C Silva, A (2014). Antidepressant-senge uye anxiolytic-kunge mhedzisiro ye cannabidiol: kemikari kemikari yeCannabis sativa. CNS & Neurological Kukanganiswa-Zvinodhaka Zvinangwa (Yaimbove Yazvino Zvinodhaka Zvinangwa-CNS & Neurological Dambudziko), 13 (6), 953-960.
Kukomborera, EM, Steenkamp, ​​MM, Manzanares, J., & Marmar, CR (8). Cannabidiol seChinogona Kurapa Kwekunetseka Kushushikana. Neurotherapeutics: iyo magazini yeAmerican Society yeUongorori NeuroTherapeutics, 12(4), 825-836.
(10).Rwendo rwekuongorora egt.
(11).Oleoylethanolamide (oea) -iye mashiripiti wand ehupenyu hwako
(12).Zvese zvaunoda kuti uzive nezve nicotinamide riboside chloride.
(13).Magnesium l-threonate inowedzera: mabhenefiti, muyero, uye mhedzisiro.
(14).Palmitoylethanolamide (pea): mabhenefiti, muyero, mashandisiro, kuwedzera.
(15).Wepamusoro 6 hutano hunobatsira hwe resveratrol zvinowedzera.
(16).Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora phosphatidylserine (ps).
(17).Wepamusoro mashanu mabhenefiti ekutora pyrroloquinoline quinone (pqq).
(18).Iyo yakanakisa nootropic yekuwedzera yealpha gpc.
(19).Iyo yakanakisa yekurwisa-kukwegura chinowedzera chenicotinamide mononucleotide (nmn).
Iyo Anandamide muchokoreti inogona kunyatso nyura, asi yakaputsika nekukurumidza zvekuti haina basa.
Iyo mwero muyero weanandamide yakaitwa CB1 kudzikisira kutya-kunge maitiro. Asi pamadosi epamusoro, anandamide yakatangawo kumisikidza ion chiteshi TRPV1, iyo yaipokana neanandamide's anxiolytic athari.
Izvi zvinodaidzwa kuti "biphasic" kana "U-yakaumbwa" mhinduro yedosi.
Anandamide inogadzirwa mumiviri yedu nepo THC neCDD inogadzirwa muzvirimwa.
Anandamide inoshanda nemuromo.
Kungoda kutaura kuti chinyorwa chako chakashamisa. Kujeka pane yako posvo kuri nyore uye kuti ini ndinogona kufunga kuti uri nyanzvi mune iyi nyaya. Zvakanaka pamwe nemvumo yako rega ndibate RSS feed yako kuti ugare uchifambidzana nepositi iri pedyo. Kutenda miriyoni uye ndokumbira ufambise basa rinogutsa
CBD inodzivirira FHAA kubva pakupaza Anandamide zvinova zvinobatsira mukuderedza kushushikana pamwe nekuderedza kuzvimba mumuviri.
Ndakaverenga zvinhu zvishoma zvinotaura zvinofadza kubva kuAnandamide pachayo, ndakaverenga zvakare kuti mumwe munhu akatora iyo Theobroma Caocao yakaburitswa uye akave nemhedzisiro. Pamwe ndichatarisa mune izvo ipapo.
Kune maviri akapatsanurwa e cannabinoid receptors mumuviri: CB1 uye CB2. THC inoshanda seagonist paCB1 inoguma ne disinhibition yedopamine.
THC uye CBD zvese zviri zviviri phytocannabinoids, nepo anandamide inogumira cannabinoid (inogadzirwa nemiviri yedu)
Kana THC ichisunga CB1 inogonesa iyo G-Protein Yakabatanidzwa receptor iyo inozobva yamutsa enzyme uye / kana wechipiri mutumwa. Mhedzisiro yeaya maGPCR anotungamira kune akati wandei mhedzisiro, senge anti-seusea, kudzikamisa, uye kurwadziwa-kuzorodza.
Zvinogona kubatsira kufunga nezvazvo senge chiRube Goldberg chishandiso - THC inosunga kune iyo CB1 receptor, iyo inogonesa iyo GPCR, iyo inogonesa huwandu hwedzimwe nzira.
Isu tine cannabinoid receptors, CB1 uye CB2 receptors kuti ive chaiyo. CB1 receptors pamusoro pekumisikidzwa, kungave kuri kwechisikigo kunoitika endocannabinoids kana synthetic kana zvakasikwa zvichiitika, inhibit akawanda emakemikari vatumwa. Imwe yeiyo ndiyo neurotransmitter GABA, iyo pachayo inotadzisa dopamine kuburitswa, ichikupa iwe chikamu chepamusoro chaunonzwa kubva kumasora. Kune mazana e cannabinoids iyo inogona kumisikidza aya maviri maakagamuchirwa, uye kune mashoma maanovel receptors ayo asina kunyatso kufundwa kuti mazhinji cannabinoids zvakare ane kusunga kunosungirirwa.